यी चर्चित कलाकार जस्ले आफ्नो शरिरको अंग दान गरे……. – News Nepali Dainik
यी चर्चित कलाकार जस्ले आफ्नो शरिरको अंग दान गरे…….
प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत्र २१, २०७७ समय: १९:०७:५४
बलिउडका सेलिब्रेटीहरु अक्सर आफ्नो फ्यान र अत्यावश्यक मानिसका लागि सहयोगको हात अगाडि बढाउने गरिरहन्छन् । अहिले कोरोना कालमा पनि सहयोगको कामलाई उनीहरुले रोकेका छैनन् । कुनै संघसंस्थामार्फत सेलिब्रेटीहरुले सहयोग गरे पनि केही सेलिब्रेटीहरुको सहयोग भने मृत्युपर्यन्त पनि छ ।
अर्थात् आफूहरुको मृत्युपछि पनि उनीहरुले आफ्नो अंगलाई प्रयोगमा ल्याउनका लागि दानको घोषणा गरिसकेका छन् । अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन अभिनयभन्दा पनि सुन्दरताका लागि प्रख्यात छिन् । उनका आँखाले जोकोहीलाई पनि प्रभावित पार्छ । उनको निलो आँखाको तारिफ विश्वभर नै हुन्छ ।
ऐश्वर्याले यिनै आँखालाई दान गर्ने घोषणा गरेकी छन् । केही वर्ष अघि उनले आफ्नो निधनपछि आँखा अरुले प्रयोग गर्न पाउने गरी दान दिएको घोषणा गरेकी थिइन् ।
अर्की अभिनेत्री प्रियंका चोपडाले आफ्नो निधनपछि सारा अंग दानको घोषणा गरेकी छन् । ‘अंगदानको महत्व के हो भन्ने मलाई थाहा छ । एक समयमा मेरो बुवालाई पनि यो कुराको आवश्यकता थियो । त्यसकारण म मरेपछि सबै अंग दान गर्ने घोषणा गरेकी छु । जिउँदो हुँदा मानिस राम्रो हुन नसकेपनि कमसेकम मरेपछि त राम्रो हुन पाइयोस्’, उनले भनेकी छन् ।
अभिनेता सलमान खानले आफ्नो बोन म्यारो दान गर्ने घोषणा गरेका छन् । त्यसतै बलिउडका महानायक अमिताभ बच्चनले पनि आफ्नो आँखा दान गर्ने बताएका छन् ।
अभिनेता आमिर खान र उनकी निर्मात्री पत्नी किरण रावले आफ्नो मृगौला, कलेजो, मुटु, आँखा, छाला, हड्डी र अन्य आवश्यकीय अंग दान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
अभिनेता आर माधवनले आफ्नो मृत्युपछि आफ्नो सबै अंग दानको घोषणा गरिसकेका छन् । अभिनेत्री रानी मुखर्जीले आँखा दान गर्ने बताइसकेकी छन् ।
Last Updated on: April 3rd, 2021 at 7:07 pm